Hadaadan maqal Jadwalka, waad sameyn doontaa .. ama waad adeegsan doontaa dhowaan! Horeba ilaa 15,000 isticmaale, Schedulicity waxay bixisaa ganacsi kasta oo dejiya ballamo si fudud loogu daro internetka, facebook iyo moobiilka jadwal iskiis ah ganacsigooda. Nidaamku waa mid aad u macquul ah… $ 19 bishiiba hal isticmaale ama $ 34 bishii isticmaalayaal badan. Shirkadda waxaa la furay sanad iyo badh ka hor waxayna leedahay qaabab adag oo dhammaystiran oo diiradda saaraya ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Schedulicity uma baahna wax softiweer ah oo lagu rakibay goobta macmiilka, kaliya labo tags oo tags ah oo keenaya isku xirnaanta… si ay ula falgalaan websaydhkaaga hadda daqiiqado gudahood. Sidoo kale, waxay leeyihiin Facebook-dhexgalka si kuwa raacsan ay u riixi karaan jadwalkaaga isla markaana ay si deg deg ah ballan uga qabsadaan Facebook:
Jadwalku kaliya maahan jadwalka jadwalka, dhab ahaantii wuxuu kaa caawinayaa inaad ula dhaqanto ballamaha furan sida haddii ay ahaayeen tiro koob. Ganacsiyada waxaa la siiyaa aaladaha suuqgeynta si ay uga caawiyaan inay buuxiyaan jadwalkooda, iyagoo adeegsanaya soo bandhig dalab: